အစာအဆိပ်သင့်ခြင်းမဟုတ်သောဆန့်ကျင်သောပျော့ပျောင်းသော silicone ကလေးပုလင်းများ
အမြောက်အများ borosilicate ဖန်ကလေးပုလင်းများ
လက်ကားထုံးစံအရည်အသွေးမြင့် ppsu ပုလင်းလက်ကား
အရည်အသွေးမြင့် ppsu ကျယ်ပုလင်းပုလင်း 180ML / 240ML / 300ML
အရည်အသွေးမြင့် Ultra ကျယ်ပြန့်သောအချင်းဖန်ခွက်ကိုတားဆီးပေးသောကလေးပုလင်း
Non-bisphenol တစ် pacifier အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ caliber ppsu ကလေးပုလင်း
Foshan Anpei ကလေးထုတ်ကုန်များ. LTD
ဂျေဂျီချန် (မိုဘိုင်း & WhatsApp ကို):
ဆူ (မိုဘိုင်း & WhatsApp ကို):
Shenbi Deng(မိုဘိုင်း & WhatsApp ကို):
6ကြိမ်မြောက်, လီတာအဆောက်အအုံ, Block B, Lianfeng စက်မှုမြို့တော်, 39 လီဂွမ်လမ်း, လီရှူးမြို့, Nanhai ခရိုင်, ဖိုရှန်မြို့, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်
Anpei ကလေးထုတ်ကုန်များ။, LTD. nanhai ခရိုင်တွင်တည်ရှိသည်, ဖoshanမြို့, စီးပွားရေးသည်သာယာဝပြောမှုနှင့်လေထုပတ်ဝန်းကျင်သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်. အဆိုပါကုမ္ပဏီရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနှင့်တည်ထောင်ခဲ့သည်ခဲ့သည် 2013, r &dကိုပေါင်းစပ်တဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကလေးထုတ်ကုန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်းအား.
Foshan Anpei ကလေးထုတ်ကုန်များ. LTD © 2020 မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး သင်္ဘောပေါ်လစီပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းဆိုင်ရာမူဝါဒကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ